Huawei dia hanolotra ny Huawei TalkBand B5 amin'ny 18 Jolay | Androidsis
Huawei koa dia manana ny toerany eo amin'ny tsenan'ny fitafiana, na dia tsy dia malaza toy ny marika hafa aza izy io. Ny marika sinoa dia efa vonona ny fehin-tànana marani-tsaina vaovao. Ity no Huawei TalkBand B5, izay efa nambaran'ny orinasa ihany. Ary ny famelabelaranao dia hitranga aloha kokoa noho ny nandrasana. Satria zara raha mila miandry herinandro isika.
Ny daty voafidy hanolorana ity Huawei TalkBand B5 ity dia ny 18 Jolay. Izy io dia amin'ny hetsika karakarain'ny marika sinoa ao amin'ny firenena misy anao hahafantarantsika ity fehin-tànana marani-tsaina vaovao ity. Inona no omen'ity bracelet vaovao antsika ity?
Ity fehin-tanana ity dia ny taranaka vaovao amin'ny marika, izay nandefa ny maodely teo aloha tamin'ny 2016. Noho izany, maro no nihevitra fa tsy hahita brasele intsony isika ato amin'ity fianakaviana ity. Saingy efa vonona sahady ny mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana.
Ny fiasa malaza indrindra amin'ity Huawei TalkBand B5 ity dia toa a ny ampahany azo esorina izay misy Bluetooth sy mpampiasa dia ho afaka hampiasa ho headphone. Zavatra manome fehin-tanana azo atao maro hafa. Ity dia fisehoan-javatra izay efa re nandritra ny volana vitsivitsy izao. Ary toa hamafisina izao.
Andrasana noho izany ity Huawei TalkBand B5 ity dia hanana efijery OLED lehibe kokoa noho ny teo alohany. Hanana asa mahazatra ihany koa isika amin'ity karazana vokatra ity toy ny fandrefesana ny tahan'ny fo, ny fanaraha-maso ny torimaso ary maro hafa. Mampanantena izany fa safidy tsara afaka manao fanatanjahan-tena.
Tsy dia fantatra loatra ny mombamomba an'ity Huawei TalkBand B5 ity. Mihetsika amin'ny tsiambaratelo maro ny marika sinoa, ka toa hiandry ny 18 jolay isika vao hihaona amin'izy ireo. Tsy fantatsika koa ny vidiny. Saingy ao anatin'ny herinandro dia hofongarantsika ny fisalasalana ary ho hitantsika izay omen'ity bracelet Huawei ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Huawei TalkBand B5 dia haseho amin'ny 18 Jolay